Mba tsy ho kobaka am-bava fotsiny | NewsMada
Natao ny fihetsiketsehana rehetra tany atsimon’ny Nosy, nitadiavana vahaolana hanafoanana ny krizy. Nanao be midina ny mpikambana ao amin’ny governemanta nampiseho fa miara-misalahy amin’ny famahana ny krizy any an-toerana. Tsy tany kosa, ny filoham-pirenena na ny praiminisitra nanisy lanjany iny hetsika nolazaina fa fihaonambe iny.
Nipoapoaka ny tatitra nilaza fa samy nandray izay tandrify azy avokoa ny minisitera rehetra amin’ny fitondrana vahaolana. Samy nilaza ho manana anjara biriky amin’ny fampandrosoana ny any an-toerana avokoa ny rehetra. Niandry fanairana izany vao mahafantatra ny tokony hataony avy izy ireo.
Mitazana ny rehetra. Miandry vokatra. Nambara fa ezaka zato andron’ny minisitera indray no hanatanterahana ireo fanamby napetraka rehetra. Raikitra àry ny hazakazaka manomboka eto. Izay iray mahavita ny azy voalohany ho derain’ny filoham-pirenena. Fa eo koa ny mponina hankasitraka tokoa raha tena tanteraka ny fanamby ary misy fiantraikany mivantana amin’ny fiainan’izy ireo.
Misy ihany izany ny vola enti-mihetsika fa miandry fifaninanana vao ampiasaina. Dradradradraina fa tsy misy vola ny fanjakana, kanefa izao mibaribary fa misy ihany any am-balahana rehefa teren’ny zava-misy.
Any atsimo izany izao ny mason’ny rehetra. Ho tapitra hatreo izany ny kere, hain-tany hanoanana, fahantrana….. Hatsangana any an-toerana ny fotodrafitrasa maro momba ny rano sy ny tohodrano. Torak’izany ny famatsiana biby fiompy sy masomboly… Ho lasa tany kanana any atsimo atsy ho atsy raha ny fipoapoakan’ny fampanantenana.
Mba tsy ho kobaka am-bava na ho fampanantenana poakatry avokoa izany fa tena hisy vokany ho an’ny mponina tokoa. Ho filamatry ny fampandrosoana mihitsy aza no faniriana ho an’ny faritra atsimo. Mba ten hifanindran-dalana amin’ireo vahaolana ireo ny fanafoanana ny halatra omby sy ny tsy fandriampahalemana izay tena mampalaza iny faritra iny ihany koa.